I-china Triaryl Phosphates Iospropylated abakhiqizi nabaphakeli | Inhlanhla
ITriaryl Phosphates Iospropylated inguketshezi olungafihli lutho futhi kufanele igcinwe ubusuku bobusuku endaweni epholile, eyomile futhi enomoya.
I-Triaryl Phosphates Iospropylated kufanele igcinwe endaweni epholile, eyomile futhi enomoya. Esitebeleni ekamelweni lokushisa, ukugwema ukukhanya kwemisebe.
Ukuhlinzekwa kokubonisana ngamanani we-triaryl phosphates isoprenylated, iZhangjiagang Fortune Chemical Co, Ltd, phakathi kwalabo abakhiqizi abahle kakhulu be-triaryl phosphates e-China, ikulindele ukuthi uthenge ngobuningi 68937-41-7, ippp 50, reofos 50 yakha ifektri yayo.
1. Amagama afanayo: IPPP, Triaryl phosphates Iospropylated, Kronitex 100, Reofos 50, Triaryl phosphates 2. (20/20 ℃): 1.166-1.185Acid Value (mgKOH / g): 0.2 maxColor Index (APHA Pt-Co): 80 maxViscosity @ 25 ℃, cps: 50-64Phosphorus Okuqukethwe: 8.1% min6. njenge-flame retardant ye-PVC, i-polyethylene, i-leatheroid, ifilimu, ikhebula, ucingo lukagesi, i-polyurethanes eguquguqukayo, izinhlaka ze-cellulosic, ne-rubber yokwenziwa. Ibuye isetshenziswe njenge-flame retardant processing aid yama-resins wobunjiniyela, njenge-PPO eguquliwe, i-polycarbonate ne-polycarbonate blends. Inokusebenza okuhle ekumelaneni nowoyela, ukuhlukaniswa ngogesi, nokumelana nefungus. 7.Iphakheji: Inetha le-230kg / iron drum (18.4MTS / FCL), 1150KG / IB CONTAINER, 20-23MTS / ISOTANK. Lo mkhiqizo uyimpahla eyingozi: UN3082 , ISIGABA 9
Ukuhlinzekwa kokubonisana ngamanani we-triaryl phosphates iospropylated, iZhangjiagang Fortune Chemical Co, Ltd, phakathi kwalabo abakhiqizi abahle kakhulu be-triaryl phosphates iospropylated kanye nabaphakeli eChina, kulinde wena ukuthi uthenge ama-triaryl phosphates iospropylated form factory yawo.